China Industrial Gelatin for Jelly Glue ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Gelatin Yezimboni ye-jelly glue uhlobo lwe-gelatin olungasetshenziswa njengesithako sokwenza i-jelly glue. I-Jelly Glue wuhlobo olusha lokunamathisela okushisa okuncibilikayo okungashisi imvelo. Ithathelwe kokuqukethwe kwemvelo futhi isithako sayo esiyinhloko yi-gelatin yezimboni.
Ukubuyiselwa emuva okushisayo kwe-gelatin
Ukubuyiselwa emuva okushisayo yizici zokufaka ezihlukile ze-gelatin: imikhiqizo ene-gelatin isesimweni sesixazululo lapho ifudunyezwa futhi isesimweni seqhwa lapho selehlile. Lokhu kuguqulwa kungenzeka ngokushesha futhi kungaphindaphindwa kaningi ngaphandle koshintsho kuzici eziyisisekelo zomkhiqizo.
Ifilimu eyakha impahla ye-gelatin
Isixazululo se-gelatin singagqokiswa ngendlela efanayo ukwakha ifilimu elincanyana phakathi kwezigaba ezimbili zesisombululo nejel.
Umaki, ukupakisha, ukuthuthwa, ukugcinwa kwe-gelatin yezimboni
Igama lomkhiqizo, igama lomkhiqizi, ikheli lefektri, uphawu lwentengiso, imodeli yomkhiqizo, inombolo ye-batch, usuku lokukhiqizwa, amapharamitha amakhulu kanye nokuqukethwe okuphelele komkhiqizo kuzomakwa ngokuqinile kuphakheji yomkhiqizo . Isitifiketi sekhwalithi yomkhiqizo kanye nenombolo ejwayelekile eyamukelwe izoba kuphakeji. Amamaki wezithombe zokupakisha, ukugcina kanye nokuhamba kufanele kuhambisane nezidingo ze-GB / T191
Ukupakisha komkhiqizo kuhlukaniswe izendlalelo zangaphakathi nezangaphandle, ungqimba lwangaphakathi yisikhwama se-PE futhi ngaphandle yisikhwama se-kraft, okufanele sivalwe ngokuqinile. Isendlalelo sangaphandle kufanele sihlanzeke, somile futhi siqine, futhi sihambisane nezindinganiso zezempilo ezihambisanayo nemithetho efanele.
Imikhiqizo kufanele ihanjiswe ngemoto yokuhamba ehlanzekile, enomoya futhi embozwe ukuvimbela umswakama nokushisa, futhi akufanele ixutshwe nezinto ezinobuthi.
Imikhiqizo kufanele igcinwe endaweni yokugcina impahla eyomile, enomoya futhi ehlanzekile yasendlini ukugwema ukuswakama, futhi akufanele ixutshwe nobuthi, kulula ukungcolisa izimpahla.
Langaphambilini I-Gelatin Yezimboni Yokunamathela
Olandelayo: I-Gelatin Yezimboni Yomdlalo